किन पक्राउ परे पाकिस्तानका पूर्वप्रधानमन्त्री अब्बासी ? यस्तो छ कारण | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more किन पक्राउ परे पाकिस्तानका पूर्वप्रधानमन्त्री अब्बासी ? यस्तो छ कारण
साउन ३ गते, २०७६ - ११:४६
बीबीसी। पाकिस्तानका पूर्वप्रधानमन्त्री शाहिद खकान अब्बासीलाई नेशनल एकाउन्टिबिलिटी व्यूरोले पक्राउ गरेको छ। अब्बसीलाई करोडौं रुपैयाँका लिक्विफाइड नेचुरल ग्यास (एलएनजी) आयात गर्न सहमति दिँदा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा पक्राउ गरिएको बीबीसीले जनाएको छ।
अब्बासीलाई शुक्रबार आज एकाउन्टिबिलिटी अदालतमा पेश गरिनेछ। मेडिकल टोलीले उनको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने बताइएको छ। एलएनजी मामिलामा उपस्थित हुन उनलाई पत्र पठाएपनि उनी उपस्थित भएका थिएनन्।
पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी र पूर्व प्रधानमन्त्री नवाज सरिफ पनि भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा जेलमा छन्। अब्बासी विपक्षी दल पीएमएल–एन पाकिसतान मुस्लिम लिग–नवाजका दोस्रो ठूला नेता हुन्। एनएबीका अधिकारीले अब्बासीलाई लाहोल टोट प्लाजा नजिकै रोकेका थिए। उनी पीएमएल–एनका प्रमुख नवाज सरिफका भाइ शहबाज ररिफलाई भेट्न जाँदै थिए।
पीएमएल–एनका प्रवक्ता मरियम औरंगजेबले अब्बासी पक्राउको विरोध गरेका छन्। उनले वारेन्ट जारी नगरी अब्बासीलाई पक्राउ गरेको भन्दै निन्दा गरेका छन्।
साउन ३ गते, २०७६ - ११:४६ मा प्रकाशित